नेपालगन्ज सहरमा दौडिएका राजेश हमाल « AayoMail
नेपालगन्ज सहरमा दौडिएका राजेश हमाल
2021,20 November, 12:02 pm
सबैभन्दा पहिले म धन्य माटोप्रति नमन गर्दछु। यी नदी अनि चट्टानहरू। मेरो जन्मभूमिका यी देवताहरू। सबै नायक अनि खलनायकहरू। सबैप्रति सम्मान…
रोबर्ट फ्रस्ट उपनामले चिनिने रोबर्ट ब्राउनिङ्ग (७ मे १८१२-१८८९) अंग्रेजी भाषाका कवि हुन्। उनको कविता ‘फिडिप्पिडिस’ उनको जीवनकालको एउटा चर्चित कविता हो।
अंग्रेजी साहित्यका स्वर्ण पदक विजेता महानायक राजेश हमालले पनि सायद यो कविता पढेकै होलान्। आज प्रसङ्ग ‘नेपालगन्ज म्याराथन’को छ।
म्याराथनको कुरा गर्दा यो कविता कसरी बिर्सनु! जो पहिलो म्याराथन धावकलाई समर्पित रह्यो।
प्राचीन यूनानी सभ्यतामध्येबाट नै म्याराथनको सुरूवात भएको पाईन्छ। करिब आठौं शताब्दी ईसा-पूर्वदेखि लगभग छैटाैं शताब्दी अवधि यो सभ्यताको ईतिहास हो।
खेल र कलाको कुनै सिमाना हुँदैन। यो पटक म्याराथनमा नेपाली चलचित्र उद्योगका एकजना हस्ती महानायक राजेश हमाल जोडिनु सकारात्मक र उत्साहप्रदक छ।
नेपालगन्जका सडकमा राजेश दाइले उत्साह थप्दै गर्दा म सम्झन्छु सन् १९९७ ताका ‘अल्लारे’ फिल्ममा ‘रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो…’ गीतमा नायिका करिश्मा मानन्धरलाई जुरुक्कै उठाएर बाँसुरी बजाउँदै नीलो पटुकीमा नाचेका- राजेश हमाल।
आज नेपालगन्जका सडकमा दौंडिदा मन जुरुक्क जुरुक्क भयो। उतिबेला उमेर र मन पनि अल्लारे थियो, अल्लारे हुँदा ‘अल्लारे’ फिल्ममा नायक थिए राजेश हमाल, यतिबेला उमेरमा थुप्रै बसन्त कटेपनि राजेश हमाल नै नेपाली चलचित्रका रियल हिरो नै छन्।
उनी त झन नायकबाट महानायक पनि भइसके। सन् १९९८ मा भारतीय म्यागिजिन ‘फेसनेटमा’ मोडल भएर दौडेका राजेश हमाल साँच्चिकै ‘हिरो’ हुन्, जो जिन्दगीको दौडबाट कहिल्यै थाकेनन्।
महानायक राजेश हमाल ‘नेपालगन्ज म्याराथन’मा नेपालगन्जका सडकमा दौडिँदा साँच्चिकै हिरो सडकमा दौडेको अनुभव नजिकबाट भयो।
ए! हिरो पनि सामान्य मानिस जस्तै हिंडछन्, डुल्छन अनि दौडिँदा रहेछन त नि।
कुनै बेला पनि थियो हिरो भनेकै राजेश हमाल।
अहिले पनि उनको हिरोवाला चमक उस्तै छ। सन् १९९४ ताका बनेको चलचित्र ‘सडक’का नायक राजेश हमाल सम्झन्छु। चलचित्रमा अभिनय गरेरमात्रै होईन वास्तविक जीवनमा पनि करोडौं नेपालीका हिरो हुन् राजेश दाइ अर्थात महानायक राजेश हमाल।
‘म्याराथन’ किवंदन्ति अनुसार फिडिप्पिडिस नामका एक यूनानी धावकको नामबाट स्थापित लामो दौडको प्रतियोगिता हो।
राजेश हमाल पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा लामो समय देखि निरन्तर दौडिरहेको नाम हो।
फारसीहरूले युद्ध हारेको खबर गर्न म्याराथन देखि एथेन्स सम्म दौडिएर खबर गर्न गएका ती यूनानी धावक थिए -फिडिप्पिडिस। ग्रीस र परेसियनबीच म्याराथनमा भीषण युद्ध भएको थियो।
एक ठाउँ पनि नरोकिएर दौडेका उनले सभा स्थलमा पुगेर भनेका थिए-‘नेनिकेकामेन’ अर्थात् ‘हामीले जित्यौं…’ यो इसापूर्व ४०० ताकाको कुरा हो। विडम्वना म्यराथन युद्ध जित्यौं भनेर खबर गर्ने उनी त्यहीं लड्छन र मृत्युवरण हुन्छ। फिडिप्पिडिस एक सैनिक ‘खबरीलाल’ थिए।
एथेन्सको म्याराथनका विषयमा यूनानी इतिहासकार प्लुटार्कको पुस्तक ‘एथेन्स कृति’मा विस्तृत पढन सकिन्छ। प्लुटार्कका चर्चित दुई कृति हुन् ‘प्यारालाल लाइभ्स्’ र ‘मोरालिया’ हुन्।
डेनिस क्रेथर्न र रिच हानाद्वारा लेखिएको पुस्तक ‘द अल्टिमेट गाइड टु इन्टरनेश्नल म्याराथन (१९९७)ले म्याराथनका विषयमा गजब्बले समेटेको छ। बोष्टर्न,न्युयोर्क,शिकागो,लण्डन र बर्लिन संसारका उत्कृष्ट म्याराथनका लागी चर्चित प्रतियोगिता हुन्।
तर सन् २००६मा रनर्स सम्पादक मण्डलले थप केही म्याराथनलाई उत्कृष्ट चुने। ती थिए एमष्टर्डम,होनुलुस,पेरिस,रोटर्डम र स्टकहोम म्याराथन। त्यसैगरी अमेरिकाको मरिनकोर,लसएञ्जल्स,रोम र बोस्टन म्याराथन कहलिएका प्रतियोगीता हुन्। यूरोपको पुरानो म्याराथन कोसिच शान्ति म्याराथन हो। जुन सन् १९२४ देखि स्लोभाकियामा चल्दै आइरहेको प्रतियोगिता हो। म्याराथन अर्थात् ४२.१९५ किलोमिटरको दौड।
सन् १९२१ मा म्याराथनको यो दूरी तय गरिएको हो। यता नेपालको उपलब्धि सन् १९७३ मा फिलिपिन्समा आयोजित एसियाली ट्र्याक एन्ड फिल्डमा नेपालका जितबहादुर केसीले म्याराथनमा काँस्य पदक जिते। नेपालको यो नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सफलता थियो। वैकुण्ठ मानन्धर, हरि रोकाया नेपालका चर्चित धावक बिर्सनै नसकिने नाम हुन्। रारा म्याराथन पनि नेपालको सबैभन्दा उच्चस्थानमा हुने उत्कृष्ट प्रतियोगिता हो। नेपालको एभरेष्ट म्याराथन चर्चित म्याराथन हो।
हरेक वर्ष यो म्याराथन मे महिनामा सगरमाथा आसपास क्षेत्रमा आयोजना हुन्छ। सगरमाथाको आधार शिविर लगभग ५ हजार ३ सय मिटरबाट दौड सुरू हुन्छ।
करिब ४३ किलोमिटरपछि ३ हजार ४ सय ५० मिटरको नाम्चे बजार पुगेर सकिन्छ। यो म्याराथन विश्वकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण म्याराथन भित्र पर्छ।
आज नेपालगन्जमा भइरहेको म्याराथनका कुरा छन्। निजी क्षेत्रबाट आयोजना गरिने यो प्रतियोगिता नेपालगन्जको एउटा मुख्य आकर्षणका रुपमा स्थापित भइरहेको छ।
‘क्रियटिभ ह्याण्ड्स’ले यो म्याराथन नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५ गतेलाई स्मरण गर्दै प्रत्येक बर्ष मंसिर पहिलो शनिबार आयोजना गर्नेगर्छ।
यो सातौं संस्करण मंसिर ४ गते हो। नेपालमा आयोजना गरिने अन्य म्याराथनमध्ये लाङ्टाङको क्याङ्जेनदेखि स्याँफ्रुबेसीसम्मको ४२ किलोमिटर दूरीको म्याराथन दौड पनि निकै आकर्षक रहने गर्छ। त्यसैगरी पोखरामा गरिने म्याराथनमा पनि उल्लेख्य सहभागिता रहन्छ।
विश्व चर्चित ‘बर्लिन म्याराथन’ जर्मनीको बर्लिनमा सहभागी धावक गोपिचन्द्र पार्की पछिल्लो संस्करणको नेपालगन्ज म्याराथनको विजेता थिए। वास्तवमा यस्ता प्रतियोगिताले आयोजना भएको ठाउँ विषेशलाई समेत अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चा गराउने अवसर जुटाउँछ। नेपालगन्ज सहरको चर्चा म्याराथनले पनि गराईरहेको हुन्छ।
यो पटक महानायक राजेश हमालको उपस्थितिले म्याराथनमा ग्ल्यामर थपिएको छ। युगदेखि युग सम्मका ती नायक जसरी महानयक बन्न सफल भए म्याराथनका धावकहरु महानायकलाई आफूसँगै दौडेको देख्न पाउँदा सफल हुँदै जानेछौं भन्ने हौसला पाएको महसुस गर्न सकिन्छ।
म यतिबेला २०१७ मा तेस्रो पटक लन्डन म्याराथन जित्ने विश्व कीर्तिमानी मेरी किटानीलाई सम्झिरहेको छु। सन्यासको घोषणा गरेकी उनले निर्धारित दुरी २ अण्टा १७ मिनट १ सेकेन्डमा पुरा गर्दै विश्व कीर्तिमान स्थापित गरेकी थिईन् । चार पटक न्यूयोर्क म्याराथन विजेता समेत हुन उनी। यसरी खेल वा कुनै विषेश प्रतियोगिताले शहर चिनाउन पनि थप सहयोग हुन्छ। अनि कलाकारको उपस्थितिले प्रतियोगीहरूको हौसला समेत बढेको महसुस गराएको छ।
आधुनिक नेपालगन्जको चिनारीमा म्याराथन पनि एउटा प्रतियोगीता हुनेछ युगौंयुगसम्म।
बिट मार्दै गर्दा,
पहिलो प्राकृतिक ‘म्याराथन’ युनानी धावक फिडिप्पिडिसले युद्धमा जितको खबर गरेका थिए, यहाँ महानायकले म्याराथन जित्न हौसला थपे।